Usoro teknụzụ: iji ihe ọhụrụ na-eme ka usoro njem ahụ dị mfe - Oluwatobi Fakayode
Ịga njem n'ime obodo na-ekwo ekwo na ndị mmadụ juru dị ka Lagos nwere ike na-arị elu mgbe ụfọdụ, na ime ka okporo ụzọ mara mma nke megacity mara ya.
N'ihe karịrị nde mmadụ 20 bi na steeti ahụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-adabere na ụgbọ njem ọha maka njem ha ma na-etinye ọtụtụ awa na-arụpụta ihe na okporo ụzọ mana ugbu a enwere teknụzụ ọhụrụ na-emegharị ụzọ anyị si aga, ma na-emeziwanye arụmọrụ nke njem. usoro.
Teknụzụ ụgbọ njem ọhụrụ dị ka ụgbọ ala kwụụrụ onwe na igwe eletrik na-enyere ndị mmadụ aka iru ebe ha na-aga ngwa ngwa yana obere akụrụngwa.
Oluwatobi Fakayode, onye guzobere Bossbus tụlere ka anyị ga-esi tinye teknụzụ iji kwalite usoro njem na mba ahụ.
Usoro teknụzụ: Atụmanya nke teknụzụ na ihe ọhụrụ na Nigeria - Dave Partner
Usoro teknụzụ: Nkà na ụzụ bụ nnukwu ngọzi nye ndị ọchụnta ego Africa - Mercy George Igbafe
Usoro teknụzụ: mkpa nke Academia na mmalite
Usoro teknụzụ: Usoro akpaaka n'ọdụ ụgbọ elu Nigeria - Sunday Folayan
CFA: Oluwatobi, nabata Tech Trends
Oulvatobi: Kedu ka ị mere?
CFA: dị egwu, ị nọ na ngalaba njem, yabụ malite site n'ịkọrọ anyị, kedu ihe ịma aka nke ngalaba na-enwe taa?
Onye ndu: Ka m kwuo maka nsogbu na-eche njem njem n'ozuzu na Naijiria na-ekwu maka Lagos. Echere m na otu nnukwu nsogbu ụgbọ njem anyị na Lagos bụ okporo ụzọ.
A na-enweta okporo ụzọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụwa nile n'ihi na ọ bụ nnukwu okwu, ị na-eleba anya na ịdị irè na ịrụ ọrụ nke ọma karịsịa maka ndị ọchụnta ego, SMEs, ndị mmadụ na-esi n'otu ebe gaa n'ebe ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, na Legọs, ị ghọtara na ọ ga-esiri gị ike ịga otu ma ọ bụ abụọ, ebe atọ n'ụbọchị n'ihi okporo ụzọ karịsịa mgbe ị na-eme ihe n'oge oge kachasị elu, oge ọrụ nke mere na nchikota na-adị arọ na ihe mere e ji enwe mkpọchị okporo ụzọ a, na Ọbụghị naanị Legọs mana obodo mepere emepe n'ozuzu bụ n'ihi mmepe obodo ngwa ngwa.
Nke a bụ n'ihi na onye ọ bụla chọrọ ịkwaga obodo mepere emepe n'ihi na ha kwenyere na enwere ohere karịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị chetara Nollywood anyị, ọtụtụ ndị bi n'ime ime obodo, olee ebe ha na-aga?
Ha na-aga Lagos ma ọ bụrụ na i leba anya na ọnụ ọgụgụ, ọnụ ọgụgụ na-ekwu na ihe karịrị mmadụ 500,000 na-akwaga Lagos kwa afọ na ọ dị mwute na okporo ụzọ anaghị agbasawanye, okporo ụzọ ahụ ka dị otu na nke a bụ nnukwu ihe ịma aka na ndị na-arụ ọrụ na Legọs nwere nnukwu ego n'ụgbọala ha na nke a bụ nnukwu nsogbu, nsogbu ọzọ anyị na-eche ihu bụ ụzọ na nhazi okporo ụzọ, atụmatụ na-ezighi ezi, ọtụtụ n'ime ụzọ ndị a anaghị ahazi ya nke ọma.
Ha echeghị n'ọ̀tụ̀tụ̀ mgbawa nke ndị mmadụ na-ahụ n'ime ime obodo taa na nke ahụ bụ nnukwu nsogbu.
CFA: Ajụjụ ugbu a bụ, kedu ka teknụzụ nwere ike isi nyere aka, kedu ụzọ maka teknụzụ?
Onye ndu: Teknụzụ na-adị mgbe niile, n'ime afọ ndị gafeworonụ ịbụ ikpo okwu nke a na-eme ka ndụ ka mma, dị mfe ma dịkwa mma maka ndị mmadụ n'ụwa niile na mpaghara ọ bụla. Nkà na ụzụ na-adị mgbe niile… Lelee vidiyo zuru ezu Ebe a.
Mmecha na-echekwa $20M Pre-usoro A gburugburu iji nye ọrụ ego na Africa
Usoro atọ ndị a ga-akpụzi ahịa Mobile App Africa na 3
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Orda dabere na ígwé ojii na-echekwa gburugburu $1.1M tupu mkpụrụ
Mmalite E-azụmahịa E-Ijipt ExpandCart nwetara $2.7M
Nestlé, Ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ iji dozie mkpa ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-akwụghị ụgwọ nke Africa